Windows တင်ပြီးဆောင်ထားသင့်သော Software များစုစည်းမှု ~ မိုးညိုသား
Windows တင်ပြီးဆောင်ထားသင့်သော Software များစုစည်းမှု
11:42 PM ဆော့ဝဲလ်များ No comments
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ ၀င်းဒိုးတင်ပြီးတာနဲ့ အဓိကအသုံးဝင်ဆော့စ်ဝဲလ်များကို စုစည်းပေးထားပါတယ်။
ဆော့စ်ဝဲအားလုံး 24 မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ မိမိလိုအပ်တဲ့ဆော့စ်ဝဲကိုကလစ်ပြီး Install လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Full Version အသစ်များကိုသာရေွးချယ်တင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
1) EMail ကိုအကောင်းဆုံးလုံးချုံအောင် ကာကွယ်နည်း။
2) Skype ကိုမြန်မာလိုကောင်းစွာအသုံးပြုနည်း။
3) Facebook ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုတတ်အောင်လေ့လာနည်း။
4) Gmail & Gtalk ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးနည်း နှင့် အသုံးချနည်းများ။
2. Myanmar Fonts All in One ( 400 in 1 )
3. Windows7Loader For (32bit / 64bit )
4. 7zip Windows (32bit)
5. 7zip Windows (64bit)
6. ESED-NOD32 Antivirus (All Windows)
7. Firefox 26 Beta 1
8. Flashplayer 11-9
11.I-Dictionary 5ဘာသာကိုမြန်မာဘာသာပြန်နိုင်သော (5 in 1 )
12.Internet Download Manager 1.18 Build4+ Patch
13.Netframe 3.5 (I-Dictionary သုံးသူများNetframe 3.5 ကိုအရင် အင်စတောလုပ်ပါ )
17.Window Media Player 11
18.ZawGyiFont For Windows7(32bit)
19.ZawGyiFont For Windows7(64bit)
20.ZawGyiFont For Windows XP (32/64bit)
ရန်ကုန်သား (နဂါးစိမ်း) က ဒီ exe ကိုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝေမျှလို့ရလို့ ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ။ စုစုပေါင်း 230 mb ရှိတဲ့အတွက် မူရင်းအတိုင်း ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။